ငါတို့ဟာငါတို့အသက်ရှင်နေကြတယ်။ Hanukeii ရှင်းပြရန်ခက်ခဲသော်လည်းသင်ခံစားရလျှင်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုထိုအခိုက်အတန့်၌ပင်စိတ်ရှုပ်စေသည်၊ နောက်ဆုံးတွင်သင်တို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုကျန်ရစ်စေပြီးပျော်ရွှင်သောအချိန်တွင်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုစတင်ခံစားရသည်။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတိုင်းသင်၏ခံစားချက်ကိုသင်သတိရပါသလား။
ရှည်လျားသောခရီးစဉ်တစ်ခုပြီးနောက်သင်သည်ကားပြတင်းပေါက်ကိုလေထဲသို့ ၀ င်လိုက်သည့်အခါသင်ပြတင်းပေါက်၏အစွန်းကိုမှီ။ ဆားငန်သောအနံ့၊ ပင်လယ်၏အနံ့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွှင်လန်းမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်စေသည်။ ဒါဟာသင့်ကိုကြိုဆိုနေတဲ့ပင်လယ်ဖြစ်ပြီးသင်ရောက်ရှိဖို့နီးကပ်ပြီလို့ကြေညာတယ်။
သို့မဟုတ်သင်ကမ်းခြေကမ်းခြေသို့ချဉ်းကပ်လာသည့်ထူးခြားသည့်အခိုက်အတန့်၌သင်ခြေဘဝါးမခံဘဲခြေထောက်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်သဲပျော့များသည်ပင်လယ်ရောက်လာသောအခါတိုင်းခြေချောင်းများအကြားလျှောထွက်လာသည်နှင့်ခြေဖဝါးကိုရှင်းပစ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ခြေဘဝါးမကျဘဲနေနိုင်သည်။ သင်ပိုမိုပေါ့ပါးစေရန်နှင့်သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ သည်ယခုအချိန်တွင်ခေတ္တရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုသင်သဘောပေါက်သည်။
ပင်လယ်လေပြင်းသည်သင့်အားပေးသောခံစားမှုဖြစ်သည်၊ စွန်ပလွံပင်များအကြားရွေ့လျားခြင်း၊ ဆံပင်ကိုဖြီးခြင်း၊ အသစ်သောလေဖြတ်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသင့်မျက်နှာသည်သင်၏မျက်နှာကိုအားဖြည့်ပေးပြီးသင့်ကိုရေ၌နှစ်မြှုပ်ရန်အားပေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာတိကျသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်သည် Hanukeii.
Hanukeii ၎င်းသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောပင်လယ်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်နေဝင်ချိန်၏လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ်းခြေမှကြည့်သည့်အခါသင်ခံစားရသောငြိမ်သက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
Hanukeii ၎င်းသည် "dolce far niente" ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ နေသည်ဖြည်းဖြည်းရွေ့သွားသည်၊ ကောင်းကင်ရှိအမြင့်ဆုံးနေရာသို့မည်သို့ရောက်ရှိနေကြောင်းလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်မှနေထွက်လာသည့်နည်းအတိုင်းပြန်ဆင်းလာပုံကိုစောင့်ကြည့်နေသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြီးပြည့်စုံလာသောအခါအလျင်အမြန်ဖြစ်လျှင်အလွန်အကျွံနှင့်တင်းမာမှုသည်စင်ပြိုင်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ အဲဒါပါပဲ Hanukeii.
၎င်းသည်ညတွင်အိမ်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ လသည်နောက်ကွယ်မှလွင့်မျောစွာထွန်းလင်းနေသောနောက်ခံရှိပင်လယ်ကိုမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Hanukeii ဒါဟာအချိန်ရှိကွောငျးသိ။ နိုးထ၏ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်စာစားရန်အတွက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ပြေးရန်၊ အနည်းငယ်ပိုအိပ်ရန်။
၎င်းသည်ရေမှထွက်ပြီးနောက်ထီးအောက်ရှိပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်အိပ်ငိုက်နေသောကြောင့်၎င်းသည်အရေပြားရှိအညိုရောင်ဘေးရှိအဖြူရောင်ရေကူးဝတ်စုံဝတ်သောအရာဖြစ်သည်။ Hanukeii ၎င်းသည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ရိုးသား၊ သာယာသောနှင့်တည်ငြိမ်သောဆွေးနွေးမှုများဖြစ်သည်။
Hanukeii နောက်ဆုံးတွင်၊ ရှာဖွေမှုအများဆုံးကားအဘယ်နည်း Hanukeii ၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု၏အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။
ကတ္တရာသဲသို့လှည့်သောအခါကားများသည်လှေများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်၊ အိတ်သည် surfboard အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးဒေါက်ဖိနပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဒါဟာလေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင်တခဏပါပဲ၊ ရထားပေါ်ကခရီးပဲ၊ ကားပြတင်းပေါက်ကနေလမ်းကိုကြည့်နေတုန်းပင်လယ်ပြင်ကိုမြင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်၊ အကွာအဝေးမှာမှုန်ဝါးနေတဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်မှာ။ သွားစရာအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းသင်သိသောအခါစိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားရသည်။ ဒါဟာစိုထိုင်းဆကနေအဆုံးပေါ်မှာရပ်နေဆံပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်သောအခါဒါဟာအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။
Hanukeii ဒါဟာပျောက်ကွယ်သွားသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည်အငွေ့ပျံနေသောအချိန်များနှင့်အံဆွဲတစ်ခုတွင်မေ့နေသောနာရီများဖြစ်သည်။ Hanukeii ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချိန်တိုင်းရှိခြင်း၊ ၎င်းသည်မိနစ်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
နေ့တစ်နေ့ကုန်ဆုံးရန်အစီအစဉ်များတစ်ထောင်ပြုလုပ်ရန်မလိုတော့ဘဲမည်သည့်အချိန်၌သင်အိပ်သွားမည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ Hanukeii နေထွက်လာတာကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူး။
Hanukeii အိမ်နှင့်အိမ်ပြန်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာပင်ဖိနပ်များအကြားတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကမ်းခြေ၊ နေနှင့်သဲတို့၏ခါးသီးလှသည့်မှတ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အနှစ်သာရနှင့်စစ်မှန်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်မရပ်တန့်ပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဤပုံစံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်ပြီးသင်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေကြားလိမ့်မည်။